पूर्वप्रम खनाल चढेको गाडी नजिकै बम विस्फोट | Radio Langtang 90.3 Mhz
इलाम, १६ मंसिर पूर्वप्रधानमन्त्री तथा वाम गठबन्धनका तर्फबाट इलाम क्षेत्र नं १ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार झलनाथ खनाल सवार नजिकै शुक्रबार बम विस्फोट भएको छ ।
खनाल माई नगरपालिकाको चुनावी सभालाई सम्बोधन गरेर फर्कंदै गर्दा शुक्रबार साँझ ७ बजे फिक्कल–पशुपतिनगर सडकखण्डको तीनखुट्टेमा बम विस्फोट भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।
विस्फोटबाट कुनै क्ष्ति भने नभएको प्रहरीको भनाइ छ । प्रहरी प्रमुख विपीन कर्मचार्यले खनाल सवार गाडीलाई लक्षित नभई बाटोमुनिको कान्लाबाट विस्फोटको आवाज आएको बताउनुभयो ।
प्रजिअ विष्णुप्रसाद पोखरेलले घटना सामान्य भए पनि विस्फोटमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन खोजी भइरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार विस्फोट खनाल सवार गाडीभन्दा १५÷२० मिटर पर भएको थियो । जिल्लामा यस्तो घटना हुन नदिन एक भारतीयसहित १३ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
संविधानको नेतृत्व गरेको दलले नै समृद्धिको नेतृत्व गर्छ ः नेता सिंह
वाम गठबन्धनको स्थिर सरकार बन्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको भनाइ
चितवन मंसिर १२, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अब देशमा वाम गठबन्धनको स्थिर सरकार बन्ने दावी गर्नुभएको छ ...
१२ घण्टापछि पासाङल्हामु मार्ग सुचारु
अविरल वर्षात्संगै पहिरो जाँदा शुक्रवार पासाङल्हामु मार्ग अन्र्तगत त्रिशूली–धुन्चे सडक अवरुद्ध भएकोमा यातायात १२ घण्टापछि सुचारु भएको छ । अविरल ...
एक लिटर इन्धनले कति उड्छ हवाईजहाज ?
एजेन्सी हवाईजहाजले कति माइलेज दिन्छ, तपाइँलाई थाहा छ ? यदि थाहा छैन भने यो पढ्नुहोस् । भिमकाय जहाजले एक किलोमिटर दूरी पार गर्नका लागि कति ...